Amajjii 28, 2020
People wearing masks at a Taipei MRT station (January 28, 2020)
Coronavirus,maqaa dhukkuba haaraa lafa dhufeeti ka addunyaan itti walgargaartee ufi irraa eeguutit jirtu.
Muddee 31,2029 irratti dhaabii fayyaa addunyaa,WHO dhukkuba haaraa Chaayinaa magalaa Wuhaan godina Wubeen keessatti argan. Ammajii 7, 2020 dhukkubii kun Coronavirus jedhanii maqaan bahe.
Ogeeyyotii fayyaa biyya dhukkubii kana itti argan,Chaayinaa irraa oduu fuudhuutti jiran.Itoophiyaalleen nama Chaayinaa galu tohachuutti jirti.
Akka ministera fayyaatii fi insituutiin fayyaa Itoophiyaa hardha waliin biyyatti himanitti Itoophiyaan dhukkuba kana biyya irraa dhowwuuf nama afur Chaayinaa gale ka dhiba kana fakkaatu irratti argan kophaatti qorachuutti jirti.
Dhukkubii kun akka malee lafatti heddachuutti jira nama xuyyuura Itoophiyaatiin dhufu oowwa nafa isaanii laalanii qorachuutit jiran jedhan.
Warra haga ammaa laalan cuftii dhiba kana irratti hin agarre taatullee akka dansaa mirkanfachuuf qorachuutti jiran jedhan.
Akka ministerii fayyaa Itoophiyaa keessaa Dr., Munir Kaasaa jedhetti Itoophiyaan nama Chaayinaa dhufu diida xuyyuura Booleetti qorattti.
Nama dhiba kana fakkaatu irratti arganillee mana isaaniitti tohatan.Ka dhibii itti jabaatu ammo hospitaalatti ergan.Dhiba kana damee hojjattutti jiraa yoo dhibi jabaate waajjira muummee minsiteratti erga.
“Yoo akkana tohannu kana nama geejjiba xuyyuuraatiin dhufe keessaa kuma 22 caalu waan shakkaniin irratti argan qoranne.Jarii kun ka qufahu,ka nafii oowwu, ka ammo lafa dhiba sun itti argan dhaqe toahanne. Kana keessa namii sadii barattoota Itoophiyaa Chaayinaa dhufan. Warra dhibii itti jabaate qorannee laabratootii Afirkaa Kibbaatti ergine. Haga ammaatti waan argine hin qamnu.”
Haga ammaatti akka Dr Muniir jedhutti dhiba Corona ka irrati argan hin jiru.
Dhiba kana fulaa hedduutti ufi irraa dhowwuutti jiran.Diidii Xuyyuura Dirree Dawaalleen nama biyya geejjibaan alaa itti dhufu dhiba kana qabaachuu fi dhibaachuu isaa irratti tohattee dabarsiti.
Akka dhaabii fayyaa addunyaa, WHO jedhutti coronaan donfofa fakkaata, nafallee nama oowwisa,oowwii ammo haga dabraa deema,achi miira nama hammeessuu hafuura kuta,laaga nama madeessa,hafuura nama kuta, fi waan akana fafakkaatuu qaba.